Thursday September 12, 2019 - 07:10:23 in Wararka by Super Admin
Munaasabad si heer sare ah loosoo agaasimay oo uu ka qaybgalay waaliga Wilaayada Banaadir Sheekh Muuse Cabdi Carraale ayaa waxaa lacago Zakawaat ah loogu qaybiyay 150 qoys oo kamid ah dadka masaakiinta ah ee ku dhaqan Wilaayada Banaadir.
Qoys walba oo kamid ah qoysaskaas 150 ah ayaa waxaa ay nasiib u heleen lacag gaaraysa $500 oo doolar taas oo ah qoondadii kaga soo aadday Zakadii ay Wilaayadu qaybinaysay.
Sheekh Muuse Cabdi Carraale Waaliga Wilaayada Islaamiga ah ee Banaadir oo goobta hadal ka jeediyay ayaa ka hadlay xaaladda uu dalku marayo gaar ahaan Magaalada Muqdisho oo dadka ku dhaqan ay dhibaato dhan walba ah kala kulmayaan maamulka Farmaajo iyo shisheeyaha xoogga ku haysta ilaha dhaqaalaha caasimadda.
Dadkii masaakiinta ahaa ee ka faa'iideystay qaybinta Zakada ee uu sameeyay maamulka Wilaayada Banaadir ayaa dhankooda ka mahadceliyay Dhaqaalaha faraha badan ee ay Zako ahaanta uga heleen maamulka Islaamiga ah.
Wilaayada Islaamiga ah ee Banaadir ayaa tan iyo sanadkii 2008-dii waxaa ay sanad walba qaybisaa Zakada,taas oo laga soo qaado dadka ay ku waajibtay ee ku dhaqan Wilaayada Banaadi iyadoona dib loogu celiyo dadka masaakiinta ah ee ku dhaqan isla wilaayadaasi.
Halkan ka degso qaar kamid ah dadkii Zakada lasiiyay MP3
Halkan ka degso Kalimadda Waaliga Banaadir Sheekh Muuse Caraale MP3
Caabuqa Covid19 oo Kumanaan kun ku dilay dalka Baraaziil.
Weeraro 14 askari ay ku dhinteen oo ka dhacay waqooyiga magaalada Kismaayo.